Saturday September 19, 2020 - 12:11:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horraysay qirtay in looga adkaaday hardankii siyaasadeed ee kala dhaxeeyay hoggaamiyaasha maamul goboleedyada.
Museveni oo gacanta bidix ku salaamaya Farmaajo
Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo tacliiqinayay natiijadi kasoo baxday shirkii ka socday madaxtooyada Villa Somalia ee looga arrinsanayay arrimaha doorashooyinka ayaa carabaabay in madaxda maamul goboleedyada ay isugu tageen uuna ku qasbanaaday aqbalaada dhammaan wixii ay soo jeediyeen.
Arrimaha Farmaajo uu sheegay in looga adkaaday ayaa ah ka tanaasulidda doorasho qof iyo cod ah oo isaga iyo xisbigiisa ay doonayeen halka madaxda maamul goboleedyada ay aad udiidanayeen.
"Waxaa ku tanaasulay markii ay gaartay meesha ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo dadka rajo xumo la geliyo waxaa isoo baday labo inaan kala doorto in dalku kala tago oo wadajirkeena lumo anoo ku adkeysanaya qof iyoc od, maxaa yeelay sharci ayaa ku taaganahay, oo hadhow i dhahaan doorashada kama qeyb galeyno oo waa qaadacnay, macnaheeda waxay tahay Somaliland awal ay gaar u taagneyd marka inaan waayo labadooda kaliya maahee shantooda waa isla socdeen" sidaa waxaa yiri Farmaajo.
Inkasta oo uu guuldarradiisa usababeeyay tanaasul iyo isagaa ka baqayay in maamul goboleedyadu gooni ugoosad noqdaan hadane waxaa hadalkiisa laga dheehan karay awoodda siyaasadeed ee madaxda maamulladu ay ku leeyihii waxa loogu yeero hanaanka Federaalka.
Wuxuu muujiyay in waxa loogu yeero beesha caalamka ay cadaadiska qeyb ka ahaayeen ayna ku qasbeen in uu ka joogsado waqti kororsi.
Khudbaddii Farmaajo uu xalay jeediyay ayaa laga dheehan karay niyad jab siyaasadeed waxaana loo badinayaa in uusan markale noqon doonin madaxweyne.
Afartii sano ee uu ninkaan xilka hayay ayuu lasoo baxay gabi dhaclayn siyaasadeed oo aad udaran wuxuuna ku fashilmay dhammaan wixii uu ballan qaaday ka hor doorashadiisi.